Ukuqhathanisa | Qhathanisa ubuhle nobubi bama-PMS ahlukene nabaphathi besiteshi
Ingabe ungumnikazi wokuqasha amaholide noma opharetha osebenza emisebenzini ohilelekile embonini yokuphathwa kwempahla? Ungahle ubheke amathuluzi angcono kakhulu wokuqalisa ibhizinisi lakho lesikhashana noma isixazululo sakho samanje asilethi lokho okudingayo ngempela. Ukukala konke okuhle nokubi kuyisidingo sokugwema ukwenza iphutha elingabiza kakhulu. Udinga usizo? Qhubeka ufunda noma ukhulume nelungu leThimba lethu eliwusizo ukuze likusize ekwenzeni kwakho izinqumo.
Noma ngabe ungumphathi wehhotela, umnikazi wendlu yezivakashi, opharetha wamafulethi anezinsizakalo, noma inkampani yokuphatha ikhaya yeholide, ngokungangabazeki kunamaphuzu amaningi obuhlungu ozama ukuwaxazulula.
Ngenkathi ufuna isixazululo, wonke amademo abukeka emuhle ekuqaleni. Kepha uma usubhalisile, usheshe ubone ukuthi konke lokho kukhazimula akulona igolide! Kungaba nzima ukuhlukanisa phakathi kwamathuluzi nezici ezikhona ngaphandle kokuthi uqhathanise i-PMS noma umphathi wesiteshi esikhathini esedlule.
Ochungechungeni lwama-athikili amafushane, uZeevou uzobe eqhathanisa izici nokusebenza kwabanye abahlinzeki ngokuqondene nokwayo. Ekugcineni, kukuwe ukuthi ukhethe i-PMS kanye / noma umphathi wesiteshi ofanelana kangcono nezidingo zakho njengomphathi wempahla yanoma yiluphi uhlobo. Siyethemba ukuthi lokhu okuthunyelwe kokuqhathanisa umkhiqizo kuzonikeza ukuhlaziywa okuningiliziwe kwe-factor-centric futhi kukusize ufike ekukhetheni okulungile.
IZeevou vs Rentivo
IZeevou vs OwnerRez
I-Zeevou vs uhlelo lwakho lokusebenza lwe-Porter
IZeevou vs iGMS
I-Zeevou vs Ngokuzonda
IZeevou vs Guess
IZeevou vs Kigo
IZeevou vs Tokeet
IZeevou vs NewBook
Vele ucele eyodwa futhi sizobanakekela bonke abanye!
Ukuchitha amahora angapheli kumademo ukuzama ukuthola amaphuzu okunamathela kwangempela nabahlinzeki abahlukahlukene kuwumsebenzi okhandlayo nongidla isikhathi. E-Zeevou, sizibophezele ekusizeni Abalingani bethu Bozakwethu ukuthi bonge isikhathi esiningi ngangokunokwenzeka. Ngakho-ke, ukunciphisa imizamo yakho yokuthola isisombululo esifanele kuwe, kwaZeevou sinikeza u-1: 1 Mahhala ngezikhathi ezimfushane kakhulu zokuhola kusukela lapho ubhukha khona. Ngaphezu kwalokho, iThimba lethu lithathe isikhathi ukubheka abanye abaphathi beziteshi, iProperty Management Systems (PMS) nabahlinzeki bezinjini zokubhuka emakethe.
Ukukhuluma nababesebenzisana nabo kumaDemo futhi senze ucwaningo olwengeziwe, sizamile ukukhipha lolu lwazi lube yiziqhathaniso eziwusizo phakathi kwezici zikaZeevou nalezo zabanye abahlinzeki, ukusiza ukubonisa ukuthi siwaxazulula kanjani amaphuzu athile obuhlungu. Vele, abanye esincintisana nabo bazonikela ngezici ezithile okungenzeka sisasilela kuzo, ngakho-ke sizamile ukubonakala futhi singachemi ngangokunokwenzeka ekuhlaziyeni kwethu. EZeevou, sizama ukuthengisa futhi sidlulisele ngaphezulu.
Siyethemba ukuthi lokhu kuqhathanisa kuyasebenziseka ngenkathi uzama ukukhetha umphathi wesiteshi ohamba phambili noma i-PMS ngezidingo zakho ngo-2021.